ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ဗိုလ်စွဲနိုင်မယ့်အသင်းကို ခန့်မှန်းလိုက်တဲ့ မန်ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှုးဟောင်း ဆာဟာ - xyznews.co
ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ဗိုလ်စွဲနိုင်မယ့်အသင်းကို ခန့်မှန်းလိုက်တဲ့ မန်ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှုးဟောင်း ဆာဟာ
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ အဲဗာတန် တိုက်စစ်မှုးဟောင်း လူး၀စ်ဆာဟာက သူ့ရဲ့ ပြိုင်ဘက်ဟောင်း ဖြစ်တဲ့ လီဗာပူးအသင်းဟာ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလားကို ဆွတ်ခူးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထောက်ခံ သွားခဲ့ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က အက်သလက်တီကို ကို အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးနောက် လီဗာပူးဟာ ကလပ်ရဲ့ ၂၅ ပွဲဆက် ရှုံးပွဲမရှိ မှတ်တမ်းကို လိုက်မှီသွားခဲ့ပါတယ်။
လီဗာပူးဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ရဲ့ မရဏအုပ်စုမှာ ၄ ပွဲ ကစား ၄ ပွဲစလုံး အနိုင်ယူကာ နောက်တဆင့်ကို အုပ်စုဗိုလ်နဲ့ စောစောစီးစီး တက်ရောက်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပရီးမီးယားလိဂ်မှာလည်း လီဗာပူးဟာ ရှုံးပွဲမရှိ မှတ်တမ်းနဲ့ အတူ အဆင့် ၂ နေရာမှာ ရပ်တည်နေပြီး အမှတ်ပေးဖလား လမ်းကြောင်းထဲမှာ ရှိနေပါတယ်။
ဆာဟာက ပြီးခဲ့တဲ့လက သူ့ရဲ့ အသင်းဟောင်း မန်ယူနိုက်တက်ကို လီဗာပူးတို့ အိုးထရပ်ဖို့ဒ်မှာ ၅-၀ နဲ့ အနိုင်ယူခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်ဟာ သူ့အတွက် ပြစ်ဒဏ်ကျခံရသလိုမျိုး ခံစားခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုလိုက်ပြီး ကလော့ရဲ့ အသင်းဟာ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလားကို သိမ်းပိုက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထောက်ခံ သွားခဲ့ပါတယ်။
ဆာဟာက “ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ဘယ်အသင်း ဗိုလ်စွဲသွားမလဲ ဆိုတာ ပြောရခက်ပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ လီဗာပူးကိုပဲ ရွေးချယ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ကစားပုံ ၊ အကောင်းဆုံး တိုက်စစ်မှုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားမှု ၊ ကြောက်စရာ တိုက်စစ် အင်အားစု ရှိနေမှု နဲ့ အရမ်းကို strong ဖြစ်တဲ့ နောက်တန်းလည်း ရှိနေလို့ပါ။ သူတို့ရဲ့ ကွင်းလယ်ပိုင်း ကလည်း အမြဲတမ်းကို လုပ်အားကောင်းလှပါတယ်။
သူတို့မှာ ချန်ပီယံ ဖြစ်နိုင်တဲ့ လူစာရင်းကို သေချာပေါက် ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ မန်စီးတီးကလည်း အကောင်းဆုံး ပုံစံ ရနေတဲ့ အခါ ကြောက်စရာ ကောင်းပါတယ်။ ဒီနှစ်သင်းကို ကျော်ဖြတ် နိုင်ဖို့ ဆိုတာ အခြားအသင်းတွေ အတွက် ခက်ခဲပါတယ်။ ယူနိုက်တက်တို့ အမှတ်ပေးဖလားကို စိန်ခေါ်နိုင်ဖို့ ကျွန်တော် တကယ် မျှော်လင့် နေပါတယ်။ ချဲလ်ဆီး ကလည်း ယှဉ်ပြိုင် နိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိမှာ လီဗာပူးကိုပဲ ကျွန်တော် တစ်ပေးထားပါတယ်။” လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
လီဗာပူးတို့ ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလားကို ဆွတ်ခူးနိုင်တယ်လို့ ဆာဟာ ယုံကြည်နေတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်း ကတော့ လက်ရှိမှာ အကောင်းဆုံး ပုံစံရနေတဲ့ ဆာလားကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ် တိုက်စစ်မှုးဟာ ဒီရာသီ လီဗာပူးအတွက် ပြိုင်ပွဲစုံ ၁၅ ပွဲမှာ ၁၆ ဂိုးထိ သွင်းယူထားခဲ့ပြီး အသင်းဖော်တွေ အတွက် ၆ ကြိမ် ဖန်တီးထားခဲ့ပါတယ်။ ဆာလားဟာ ယူနိုက်တက်ကို ဟက်ထရစ် သွင်းယူကာ လက်ရှိမှာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ကစားသမား ဖြစ်နေကြောင်း သက်သေပြသွားခဲ့ပြီး ဆာဟာက အီဂျစ်စတားဟာ ဘလွန်းဒီအောဆုနဲ့ ထိုက်တန်တယ်လို့ ယုံကြည်နေပါတယ်။
ဆာဟာက “ကျွန်တော် သူ့ရဲ့ ကစားဟန်ကို တကယ် ကြိုက်ပါတယ်။ သူ လီဗာပူး ကစားသမား ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ် ကျွန်တော် သူ့ကို လေးစားမိပါတယ်။ ကံကောင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ ယခုနှစ် ဘလွန်းဒီအောကို ကြည့်လိုက်ပါ။ မက်ဆီ နဲ့ ရော်နယ်ဒို တို့ဟာ ခါတိုင်းနှစ်တွေကလိုမျိုး အပြတ်အသတ် ရေပန်းစားနေတာ မရှိပါဘူး။ ဘယ်သူမဆို ဒီဆုကို ရနိုင်ပါတယ်။
အကယ်လို့များ ဒီဆုကို မိုဆာလား ရခဲ့မယ် ဆိုရင် သူဟာ ဒါနဲ့ အမှန်တကယ် ထိုက်တန်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေကို ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ ဘောလုံးအပေါ် သူ့ရဲ့ အာရုံစူးနှစ်ထားမှု ၊ တောက်လျှောက် တည်ငြိမ်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြသခဲ့မှု စတာတွေကြောင့် ကျွန်တော် ကတော့ သူ့ကို ဒီဆုအတွက် ထောက်ခံပါတယ်။”
Previous Article ခပ်ကြမ်းကြမ်းပြီးသွားတဲ့ ကွန်တီ ရဲ့ ပထမဆုံးပွဲ ၊ ဇာဗီ နဲ့ နီးစပ်လာတဲ့ ဘာဆာ ၊ ဒဏ်ရိုက်ခံရတဲ့ ရိုနယ်ဒို တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းမျာ
Next Article လီဗာပူး သရေ ၊ မန်ချက်စတာမှာ အပြာရောင်လွှမ်းမယ်ဆိုတဲ့ . . . EPL Week 11 အတွက် ခန့်မှန်းချက်များ